mujeer ဇန္နဝါရီလ 1, 20180မှတ်ချက်များ
EagleGet EagleGet You should get for your internet problem, this version is alternative of 2018, ဒီနေ့ခေတ်, You should take the new version of any software and Android application. အင်္ဂါရပ်များ: Accelerate downloads by using multi-threaded technology Download online videos from popular sites Accelerate download speed by up to6ကြိမ်. Supports all kinds of files, and HTTP, HTTPS ကို, FTP, MMS ကို, RTSP protocol. Completely free, no virus! ဆက်ဖတ်ရန်: ထိပ်တန်း 10+ BEST Wi-Fi HACK APP FOR ANDROID How-To ဆက်ဖတ်ရန် [...]
mujeer ဒီဇင်ဘာလ 16, 20170မှတ်ချက်များ
Sony Vegas Pro 13 Sony Vegas Pro is outstanding as an effective, yet learner neighborly video altering program. Braggingafew new expert-level highlights andatrio of new modules, ဗားရှင်း 13 hasaton to offer, သို့သော်, is it enough to legitimize an overhaul? A wide cluster of video altering programming programs spots the after generation scene nowadays. The Basics Sony Vegas Pro 13 isacourse of events based proofreader that is genuinely simple to learn and utilize. On the off ဆက်ဖတ်ရန် [...]
ကျနော်တို့ကို Adobe Creative Cloud ဓါတ်ပုံပညာအဘယ်အရာလိုအပ်ဖြစ်ရမည်
mujeer ဒီဇင်ဘာလ 14, 20170မှတ်ချက်များ
[dropcap]ငါ[/dropcap]ဎဒီအပိုဒ်, ငါတို့သည်သင်တို့အဘို့အဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကို Adobe Creative Cloud ဓါတ်ပုံပညာရေးလိုက်စေချင်သစ်နှင့်နောက်ဆုံးပေါ် update ကိုသူတို့အားသည်အခြားပလက်ဖောင်းမှလာမယ့်ပေမယ့်ယခု wikiwon သင်နောက်ဆုံး update ကိုပေးစေခြင်းငှါတတ်နိုင်ကြသည်ဖြစ်ပါသည်. ကျနော်တို့နေ့စဉ် wikiwon တခုတခုအပေါ်မှာဆောင်းပါးထုတ်ဝေဖို့အသုံးပြုကြသည်, နှင့်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကောင်းသောအရည်အသွေးနှင့်အရေအတွက် post ဖို့ကြိုးစား, ကျနော်တို့အခြားခေါင်းစဉ်ပေါ်တွင်ဆောင်းပါးရေးဖို့အကြောင်းသင်ဤစာမကျြနှာကိုလိုက်နာစေခြင်းငှါ. Adobe Creative Cloud Photography You may download this software from many websites, ဆက်ဖတ်ရန် [...]
Mac အတွက် Cyberduck 6.2.10 / 6.3.0 ညစဉ်ညတိုင်းကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း & အခြားနည်းလမ်း
mujeer နိုဝင်ဘာလ 16, 20170မှတ်ချက်များ
တိုင်းဆာဗာကိုချိတ်ဆက်နေသည်။" ယေဘုယျအမြင်. While originallyCyberduck was SFTP program designed particularly for the MAC OS, Mac အတွက် Cyberduck စျေးကွက်ကြွလာတော်မူ, likely said on the website that providing you latest version software's your should need to yourself, Cyberduck for Mac provides now new and latest version. Mac အတွက် Cyberduck 6.2.10 အဆိုပါ Cyberduck ယခု wikiwon သင် Cyberduck ကောင်းတစ်ခုရလဒ်များကိုတတ်နိုင်သည်စျေးကွက်အပေါ်လာ. သင့်ရဲ့ PC အတွက်လိုအပ်ချက်များဖြစ်ရမည်, So Now Cyberduck for ဆက်ဖတ်ရန် [...]
F-Secure KEY ကို 4.7.114 နောက်ဆုံးရဗားရှင်းအခမဲ့ Download
F-Secure Key 4.7.114 has come in the market and F-Secure Key 4.7.114 providing the best quality new version for you, you must try it on your PC. F-Secure Key 4.7.114 is fantastic looking. သင်အသုံးပြုလိုသောအဖြစ်ဆော့ဖ်ဝဲဟာ PC နဲ့ဘာမှနည်းပညာလေ့အသုံးပြုနေသည်, တဦးတည်းဆော့ဖျဝဲဘယ် website မဆိုနဲ့တူဈေးကွက်ထဲမှာအသစ်တခုနောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းကိုမှလာမယ့်ယခုသင်သည်နောက်ဆုံးဗားရှင်းဆော့ဖ်ဝဲကိုပေးစေခြင်းငှါတတ်နိုင်အနိုင်ရ Wiki. F-Secure KEY ကို 4.7.114 Latest Version Download Free F-Secure KEY 4.7.114 F-Secure's KEY ဆက်ဖတ်ရန် [...]
အောက်တိုဘာလ 10, 20170မှတ်ချက်များ
There wasatime when social media and instant messaging services did not even exist. But today it has become almost unfeasible to imagine and livealife without these computer-mediated technologies. Facebook alone has more than 1 billion active users across the world and the figure is onacontinuous rise. The perks of these social networking platforms are irrefutable as they provideagateway to get introduced with the rest of the world but it is not without pitfalls. This article discusses ဆက်ဖတ်ရန် [...]
Software များ, နည်းပညာ